Robin Van Persie Oo Markii Ugu Horreysay Sharaxaad Faah-Faahsan Siiyay Jamaahiirta Arsenal Ee Kaga Cadhaysan Inuu Man United Kaga Biiray Sanadkii 2012. - Gool24.Net
May 24, 2019 Apdihakem Omer Adem
Weeraryahankii hore ee xulka Holland ee Robin Van Persie oo dhawaan ka hawl gabay kubadda cagta ayaa sharaxaad ka bixiyay sababtii uu uga tagay kooxda Arsenal sanadkii 2012 isla markaana uu ugu wareegay kooxda ay cadaawadu ka dhaxayso ee Man United.
Van Persie ayaa wacdarro ku dhigayay Arsenal kahor intii uusan ka bixin waxaana uu xilli ciyaareedkiisii ugu dambeeyay soo dhaliyay 37 gool kaddib 48 kulan oo uu ciyaaray tartamada oo dhan.
Si kastaba, Arsenal ayaa ku dhibanayd inay hanato Premier League iyo dhammaan koobabka kaleba waxaana uu RVP qaatay go’aanka ah inuu ku biiro kooxdii Sir Alex Ferguson ee Man United.
Marka laga yimaado inay ka xanaaqeen go’aankaas taageerayasha Arsenal haddana Van Persie ayaa gaadhay ujeedkiisii isaga oo ku guuleystay horyaalka iyo gool-dhalintaba xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyay ee Old Trafford.
Van Persie ayaa haatan sheegay inuu fahamsan yahay sababta ay jamaahiirta Arsenal u xanaqaaneen kana raali gelinayo balse kaasi uu ahaa go’aan uu qaatay walina uu ku taagan yahay.
“Waan fahmay in jamaahiirtu ay iga cadhaysnaayeen aniga, Waxaan ahaa kabtanka, Gool dhaliyaha ugu sarreeya waxaananu nimid booska saddexaad sanadkaas laakiin wakhtiyada qaar waxaad dareemaysaa inaad loolan u baahantahay, Wax cusub oo xiiso leh” Ayuu yidhi Van Persie
“Haddii aan dhaawaco dadka waan ka xumahay laakiin kaasi waa aniga, Waan sameeyay go’aankaas waanan ku taaganahay laakiin taasi lama micno aha inaan qaab taban u eegay Arsenal”
“Wakhtiyada muhiimka ah waa inaad samayso go’aano adag waxaana uu ahaa go’aan aad u adag laakiin waa inaad daba joogsato go’aanadaas taasina waa waxa aan sameeyay”